Lasibatry ny Minisiteran’ny Atitany amin’ny vesatra fampihorohoroana mampiady hevitra ny Kaominina Istanbul · Global Voices teny Malagasy
Nanaovan’ny Minisiteran'ny Atitany famotorana heloka bevava ny Kaominina Istanbul
Voadika ny 07 Janoary 2022 5:25 GMT
Pikantsary avy amin'ny fanambarana an-gazety nataon'ny ben'ny tanànai CHP miisa iraika ambin'ny folo tamin'ny 27 Desambra 2021.
Nanao fanadihadiana heloka bevava tamin'ny Kaominina An-tanandehiben’ Istanbul (IBB) ny Minisiteran'ny Atitany ao Tiorkia tamin'ny 26 Desambra — fifandirana farany indrindra teo amin'ny Antokon’ny fitondrana Rariny sy ny Fampandrosoana (AKP) sy ny Antoko mpanohitra lehibe Antokon'ny Vahoaka Repoblikana (CHP). Nilaza ny Minisitera fa manana fifandraisana amin’ireo fikambanana mpampihorohoro ny ireo mpiasan’ny kaominina sasany.
Tamin’ny 30 Desambra, nandray ny fiampangana ny fitsarana tany Torkia. Hanomboka ny 18 febroary 2022 ny fitsarana. Higadra 3 taona sy tapany ka hatramin’ny 15 taona an-tranomaizina ny voampanga raha meloka. Na dia nilaza aza ny minisitry ny atitany, Suleyman Soylu, fa tsy misy resaka politika ny fanapahan-kevitra fa noho ny antony fiarovana fotsiny ihany, dia nanakiana ny zava-nitranga ary naneho ny fanohanany imasom-bahoaka ho an’ny mpiasa miisa 80.000 mahery miasa ao amin'ny kaominina ny Ben'ny tanànan'i Istanbul, Ekrem İmamoğlu izay misolo tena ny CHP.
Nizara sioka ny Minisiteran’ny Atitany milaza fa misy mpiasan'ny kaominina maherin'ny 500 sy orinasa mifandraika amin’izany manana fifandraisana amin'ireo milisy Kiorda, elatra ankavia, ary vondrona hafa mampiady hevitra.
Miahiahy ny mpandinika sasany, anisan'izany ny mpitarika ny CPH, Kemal Kılıçdaroğlu, fa nokasain’ny Antoko Rariny sy Fampandrosoana natao ny famotorana mba hanoloana an'i İmamoğlu amin'ny mpitantana notendren'ny governemanta alohan'ny fifidianana ankapobeny hoavy amin'ny taona 2023.
“Ny mpitantana voatendrin'ny governemanta (kayyum amin'ny teny Tiorka) dia olona notendren'ny governemanta hitantana andrim-panjakana, izay matetika orinasa ara-barotra manao fandraharahana ampahibemaso, izay nahitana kolikoly sy fanararaotana, mandra-pisian'ny fitantanana vaovao,” hoy ny nohazavain’ilay mpanao gazety Fehim Tastekin.
Taorian'ny fanonganam-panjakana tsy nahomby tamin'ny taona 2016, niitatra ny rafi-pitantanan'izay itokisana ka nampidirana kaominina sy ny andrim-panjakana hafa, hoy ny teny nampian’i Tastekin. Teo aloha, rehefa nosoloan'ny fitondrana AKP ny ben'ny tanàna Kiorda voafidy (mpikambana ao amin'ny Antoko Demokratikan'ny Vahoaka Kiorda, HDP), dia nilaza ihany koa izy ireo fa tsy resaka politika ny fanapahan-kevitra fa resaka lalàna. Ankoatra izany, nampiakarin’ny governemanta fitsarana sy nomelohiny ny olona an'aliny maro ho nanao fampihorohoroana, nanomboka tamin'ny fikasana fanonganam-panjakana tsy nahomby tamin'ny taona 2016 — anisan'izany ny ben'ny tanàna HDP maro.
Heverina fa mety ho kandida matanjaka amin'ny fifidianana ankapobeny hoavy ihany koa i İmamoğlu ary mety hanohintohina ny filatsahan'ny filoha ankehitriny Recep Tayyip Erdoğon.
Nandritra izany fotoana izany, milaza ny mpitarika ny Antoko Hetsika Nasionalista (MHP), Devlet Bahçeli, fa tsy maintsy esorina amin'ny toerany i İmamoğlu raha toa ka hita fa meloka izy amin’ny famotorana. Ao amin'ny governemanta iraisana miaraka amin'ny antokon’ny fitondrana AKP ny MHP. “Namadika an'i Istanbul ny ben'ny tanàna raha mitombina ny fiampangana. Tsy azo avela ho afa-maina ity famadihana ity,” hoy i Bahçeli tamin'ny antsafa iray taorian'ny fanambarana ilay famotorana.
Nandritra izany fotoana izany, nilaza ny Kaominina An-tanandehibe an’ Istanbul (IBB), tamin'ny andiana sioka tamin'ny 26 Desambra, fa manohana ny mpiasa ao aminy rehetra izy ary hitady ny rariny eo anatrehan'ny lalàna. Nilaza ihany koa ny kaominina fa andraikitry ny Minisiteran'ny Atitany ny mamantatra ireo olona mifandray amin'ny fikambanan’ny mpampihorohoro, fa tsy an'ny kaominina:
Hitady ny rariny eo anatrehan'ny lalàna hatramin'ny farany ny IBB sy ny mpiasa miisa 86.000 ao aminy.
Raha afaka mirenireny sy mitady asa eny amin’ny fanjakana ireo olona mifandray amin’ny “mpampihorohoro” dia tsy olan’ny IBB izany fa olan’ny minisiteran’ny Atitany miandraikitra ny filaminana. Tsy maintsy mizara ny vaovao sy ny antontan-taratasy ananany amin'ny IBB ny ministera manan-danja indrindra ao amin'ny fanjakana fa tsy miditra amin'ny adihevitra politika.
Tsy vao sambany ny ben'ny tanànan'i Istanbul no niharan’ny fifanandrinana avy amin’ny antokon'ny fitondrana.
Tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny taona 2019, votsotra teo amin'ny AKP ireo tanàndehibe, anisan'izany ny renivohitra Ankara sy ny Kaominina Istanbul, izay nentin'ny AKP nandritra ny 25 taona. Rehefa nambara tao Istanbul ny voka-pifidianana, nitaky ny famerenana ny fifidianana ny antokon'ny fitondrana, nanizingizina fa nisy ny hosoka sy ny tsy fanarahan-dalàna. Nandresy tamin’ny fifidianana niverina mbola nahazo vato 800.000 fanampiny i İmamoğlu.
Fotoana fohy taorian'ny fifidianana, voampanga ho nanevateva ireo mpikambana ao amin'ny Birao Ambony misahana ny Fifidianana i İmamoğlu rehefa nilaza izy fa “nisy fiantraikany teo amin'ny toerana iraisampirenena misy an'i Tiorkia ny fanapahan-kevitra, ary hadalana hoy izy ilay didim-pitsarana.” Tamin'ny volana May 2020, namoaka sazy 4 taona ho an'i İmamoğlu mifototra amin'io fiampangana io ny fiampangan'ny mpampanoa lalàna.
Tamin'ny volana Aprily 2020, rehefa nahitana trangana coronavirus voalohany tao Tiorkia, dia niampanga ny ben'ny tanànan'i Istanbul sy Ankara ny antoko eo amin'ny fitondrana ho nanao hetsika tsy ara-dalàna taorian'ny fanambarana nataon’ny kaominina roa nanao fanentanana famatsiam-bola amin'ny COVID-19.
Nisy ihany koa ny fandrarana ny fanentanana nataon’i İmamoğlu hizara arovava-orona maimaimpoana. Araka ny filazan'ny mpanao gazety Amberin Zaman, “Niampanga ny CHP i Erdoğan ho nanao fihetsika tahaka ny an’ny fikambanana voarara noho ny fampihorohoroana tamin’ny fanaratsiana ny fiatrehan'ny governemantany ny valan’aretina mba hampisy korontana. Mitaky firaisankinam-pirenena ny krizy, hoy izy.” Tamin'ny herintaona, tao anatin’ny hetsi-panoherana tao amin'ny Oniversite Bogazici malaza ao Istanbul, niampanga ny CHP ho “mampiasa fampihorohoroana” sy “mandranitra ny tanora” ny filoha Erdoğan.
Raha niresaka nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 27 Desambra 2021 ny Ben'ny tanànan'i Istanbul, dia mbola nanameloka indray ny fiantsoana ho eny amin'ny fitsarana vao haingana ary niampanga ny governemantan'ny fitondrana ho manodikodina ny saina tsy hitodika amin'ny krizy ara-toekarena.